IIFILIMU EZIPHAMBILI ZOKUBUKELA UMABONWAKUDE KULE VEKI | I-BBC, ISIBHAKABHAKA NOKUNYE - IRADIO TIMES - YINTONI-UKUBUKELA
Ezona bhanyabhanya zibukeleyo kumabonwakude namhlanje, ngokuhlwanje nange veki
Nokuba ungathanda ntoni, kukho imovie kuwo wonke umntu.
Ukuba ufumanisa ukuba uya uqhela kancinci kukhetho lwefilimu kwigama elinamagama amakhulu, awuwedwa.
Ngelixa uninzi luzisa ngokuzenzekelayo kwiNetflix nakwiVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon, ukusasaza ayisiyiyo kuphela indlela yokubukela imovie kwintuthuzelo yekhaya lakho.
Kwaye nangona ilizwe livula kwakhona emva kokutshixwa, uluhlu lweefilimu ezinkulu kumabonwakude asemhlabeni luthembeke njengakuqala-kubandakanya ukuthanda okudala kwakudala, uluhlu lwezinto zakudala zala maxesha nayo yonke enye into ephakathi.
Ukusuka NGOKU TV kwaye I-Disney + , kwiminikelo yeTV yasemhlabeni - kuninzi kakhulu onokukhetha kuzo kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo ngoko ke akukhathaleki ukuba ukule meko, ungafumana into yokubukela.
Fumana iinyanga ezili-12 zeSky Cinema£ 11.99£ 9.99 / ngenyanga
Ngeemiboniso bhanyabhanya ezimangalisayo ezisasazwa kumabonwakude kule veki, siqulunqe uluhlu lwezona zinto zibalaseleyo onokuzikhetha.
NgoLwesihlanu we-16 kaJulayi
Ukuseta - 12:15 pm, Iimuvi eziMkhulu zakudala
Imbethi manqindi ekhulileyo ilungiselela umlo, ingasihoyi isibongozo somfazi wayo sokuyeka. Ufumanisa ukuba umphathi wakhe wenze isivumelwano nomngcakazi okhohlakeleyo ukuze aphose umlo. Enomsindo, uyangena eringini ezimisele ukuphumelela, engazazi iziphumo eziyingozi ukuba uyaphumelela. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Ezingcolileyo -6pm, TCM
Isikhulu esingaguqukiyo sibekwa kulawulo lwemishini ebonakala ngathi inokuzibulala yokutshabalalisa iChateau yaseFrance esetyenziswa njengesiseko ngamagosa amaNazi. Ukufuna amajoni anzima kodwa asebenzayo kulo msebenzi, waqesha izigebenga ezili-12 ezomeleleyo kwintolongo yasemkhosini. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Uhlobo olulula - Ngo-10: 35 emva kwemini, iBBC enye
UStephanie Smothers, umama ongumhlolokazi ongatshatanga oqhuba ubugcisa kunye neendlela zokupheka, uba ngumhlobo noEmily Nelson, umlawuli wobudlelwane noluntu kwinkampani yefashoni. U-Emily unengxaki yomsebenzi kwaye ubuza uStephanie ukuba amgcinele unyana wakhe, kodwa kamva uyalahleka phakathi kweengcebiso ezivela koogxa bakhe aye eMiami. Ndiziva ndididekile, uStephanie uzama ukuya ezantsi kwizenzo ezimangalisayo zomhlobo wakhe. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Igolide 12:05 am, BBC ezimbini
Uphando lukaDetective Jay Swan lokunyamalala kwebhinqa eliselula lubangela ukuxabana kwilokishi yase-Outback phantsi kwenkampani yezemigodi. Ipolisa lendawo uJosh Waters liyakhula lisetyenziselwa ukujonga kwelinye icala urhwaphilizo lwemihla ngemihla, ngelixa umdala womthonyama uJimmy ebona uJay enonxibelelwano olunzulu nentsimi. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoMgqibelo nge-17 kaJulayi
Ijam yendawo -2: 55 pm, ITV2
Xa abalinganiswa bakudala beLooney Tunes (i-Bugs, iDaffy, iPorky, njl.) Benyanzelwa ukuba badlale umdlalo obalulekileyo webhola yomnyazi ngokuchasene nabafokazi abangalunganga, i-superstar uMichael Jordan uyabahlangula. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Ukudanisa neengcuka -5: 30 pm, iParamount Network
U-Lieutenant John Dunbar ligorha leMfazwe yoLuntu onqwenela ukubona umda we-Western unikezwe ngokuposa kwi-fort elahliwe yoMzantsi Dakota. Ngelixa ulinde ukuqiniswa, uDunbar waba ngumhlobo wesizwe saseIndiya iLakota Sioux kwaye watsaleleka kwinkcubeko yabo. Kodwa yindlela yokuphila esiba phantsi kwesoyikiso esivela kubaphambukeli abamhlophe. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Dunkirk -9: 00, BBC enye
Ngexesha lokufuduswa kwe-Bhritane e-Dunkirk ngo-1940, abantu abathathu balwela ukusinda. Njengamajoni aselula uTommy elinde ukubalekela elunxwemeni, umatiloshe ovela e-Weymouth unceda kwimizamo yokuhlangula, ngelixa umqhubi wenqwelo moya uSpitfire ebonelela ngenkxaso yomoya kwaye efumana umbono ocacileyo kubunzima obenzeka ngezantsi. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Intlola eyandilahlayo -9pm, iTshaneli 4
Xa isoka lika-Audrey limlahla ngomhla wokuzalwa kwakhe kwe-30, yena kunye nomhlobo osenyongweni uMorgan bagqiba kwelokuba bazitshise zonke izinto zakhe. Nangona kunjalo, kuvela ukuba u-Audrey's ex yiarhente ye-CIA kwaye, xa ebuyela kwigumbi lakhe eyokukhupha into ebalulekileyo, u-Audrey noMorgan baxakeke kwisithambiso sesigameko esiphakamileyo samazwe aphesheya .. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Usana lukaBridget Jones - 10:55, ITV
Into engamashumi amane uBridget usajonga ubomi ngeglasi yaseChardonnay kwaye uqhubeka nokuba ungatshatanga de ubomi buthabathele xa efumanisa ukuba ukhulelwe. Into ekufuneka ayenzile ngoku kukufumanisa ukuba ngubani utata. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgeCawa nge-18 kaJulayi
Ukhetho lukaHobson -1: 45 pm, Imifanekiso ethetha ngeTV
Ngelixa iintombi zakhe ezintathu ezingatshatanga ziqhuba ivenkile yakhe, umenzi webhutsi uHenry Hobson udlulisa ixesha lokusela. Kodwa ishishini eliqhuba kakuhle likaHobson lisongelwa emva kokuba intombi yakhe endala itshate nomncedisi wayo, olulamileyo uWillie Mossop .. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Ibali laseNtshona - 1:50 pm, BBC ezimbini
I-Shakespeare i-Romeo noJuliet ihlaziywa ukuya ngasekupheleni kwe-1950s eNew York apho amaqela amabini aphikisanayo, iiJets zaseMelika kunye neePuerto Rican Shark zilungiselela ukungqubana. Uxinzelelo luyanda xa uMaria, udade wenkokheli yeShark uBernardo, ethandana nowayesakuba yiJet, uTony. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Impembelelo enzulu - 4:40 pm, E4
Intatheli ikholelwa ukuba ifumene ihlazo ngesondo kurhulumente wase-US. Njengoko kuvela, u-Ele akayona inkosikazi, kodwa into esetyenziselwa ukuchaza isiganeko sentlekele kangangokuba inokutshabalalisa iplanethi. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
UHarry Potter kunye neQela leeMfihlakalo -6: 05 pm, ITV
Xa uHarry, uRon noHermione bebuyela eHogwarts School of Witchcraft and Wizardry bekwikota entsha, bafumana umyalezo ombi obhalwe ngegazi eludongeni. Ngaba luphawu lokuba imikhosi emnyama yeNkosi Voldemort ingene ngaphakathi esikolweni? Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Indawo yokuGcina indlu yaseLime - Ngo-10: 30 emva kwemini, BBC ezimbini
UVictorian waseLondon ubanjiswe luthotho oloyikisayo lokubulala kunye noMhloli uKildare wabelwe ityala. Ngaba likho ikhonkco kwelinye ityala elibandakanya umfazi otyholwa ngokutyhefa umyeni wakhe - okanye ukubulala kungangumqondiso kaGolem odumileyo kwizitrato zaseLimehouse? Kwaye uKarl Marx kunye nomlingisi weholo yomculo uDan Leno bazifumana bebandakanyeka njani? Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoMvulo we-19 kuJulayi
Inenekazi laseShanghai -12: 40 pm, Great Movies Classic
UMichael O'Hara uqeshwe ligqwetha u-Arthur Bannister ukuba asebenze kwisikhephe sakhe, kwaye ngexesha lokuhamba ngenqanawa uzibona etsala ngumfazi omncinci ka-Arthur, u-Elsa. Nangona kunjalo, iintshukumo zikaMichael no-Elsa zijongwa ngumcuphi wabucala, ngelixa ukufika kweqabane lika-Arthur kwishishini ubona iziganeko zithatha ukubulala. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Scott waseAntarctic -2: 30 pm, BBC ezimbini
Emva kokuyalela ukungaphumeleli kweSizwe se-Antarctic Expedition yowe-1904, uScott uzama ukunyusa imali yokubuyela kummandla. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Isiphelo seBourne -9pm, ITV4
Xa inqaku malunga nokusebenza okufihlakeleyo kwe-CIA kuvela kwi-Guardian, umbulali oqeqeshiweyo uJason Bourne uya eLondon ukuya kudibana nentatheli emva kokubhengeza onokuthi akwazi ukukhanyisa ixesha elidlulileyo likaBourne. Kodwa abaqeshi bakhe bangaphambili bakwindlela kunye nemiyalelo yokuqinisekisa ukuba intlanganiso ayenzeki. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoLwesibini umhla wama-20 kuJulayi
Indoda enxibe iisuti ezimhlophe -2: 50 pm, BBC ezimbini
Uvavanyo olukhangeleka ngathi luyinto engekhoyo yesazinzulu se-eccentric u-Sidney Stratton unefuthe elibonakalayo kumzi mveliso wempahla eyolukiweyo xa evelisa ilaphu elingenakonakala elingaze lingcoliswe. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Umdlalo oxelisa -6: 45 pm, Film4
Isazinzulu kunye nesazi sezibalo u-Alan Turing ufika eBletchley Park, eBritani eyaphula umthetho, kwaye uzimisele ukuqesha iqela eliza kuqhekeza i-Enigma Code yaseJamani. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Umkhenkce -11: 40 pm, Film4
Kwihlabathi elihlaselwe likhephu, iqela labahambi lilwela ukusinda kuloliwe ojikeleza ngokujikeleze umhlaba. Abahlali bezithuthi bahlulahlulwe baba ngumphathi olawulayo emkhosini kunye nabathinjwa babo abangcolileyo. Kodwa ngoku, kwiminyaka eli-17 emva kokuba uloliwe esendleleni ebonakala ngathi ayinasiphelo, abaxhwalekileyo, abathinjwa abahlukumezekileyo banele. Inguquko iqhubeka. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoLwesithathu umhla wama-21 kuJulayi
Amehlo Amakhulu -4: 15 pm, Film4
Kwiminyaka ye-1950 kunye neye-60 umculi waseMelika uWalter Keane ufumana udumo ngemizobo yakhe yokuhombisa ngamehlo abanzi. Nangona kunjalo, igama lakhe kungekudala liza kujongwa emva kokuba kuvele ukuba inkosikazi yakhe, uMargaret, yeyona talente yokwenene emva kwalo mzimba womsebenzi. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Uthando & Nenceba -9pm, iiMovie eziMnandi
Ngelixa urekhoda i-albhamu kunye neqela lakhe, iBeach Boys, ngeminyaka yoo-1960, imvumi uBrian Wilson wayesokola uloyiko olwaluchaphazela abalingane bakhe. Emva kwexesha, kwii-1980s, uWilson osele ekhulile ungena kubudlelwane kunye nomthengisi waseCadillac, kodwa uvavanyo olunzulu lonyango lwakhe lusongela ukuphazamisa umanyano ngaphambi kokuba luqokelele umfutho. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Isikhumbuzo -11: 15 pm, BBC ezimbini
U-Leonard Shelby uzimisele ukuphindezela ukudlwengulwa kunye nokubulawa komfazi wakhe, kodwa uyaphazanyiswa kukulahleka kwenkumbulo kwithuba elifutshane emva kokubethwa entloko. Ukunyanzelwa ukuba urekhode yonke into ngamanqaku akhutshelweyo, iifoto zePolaroid kunye neetatoo, ukuthanda kukaLeonard kumkhokelela kwihlabathi apho kungekho mntu unokuthenjwa .. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoLwesine umhla wama-22 kuJulayi
ICold Comfort Farm -8pm, BBC Isine
Ngo-1930 eLondon, kutshanje uFlora Poste oyinkedama unikwa ithuba lokuhlala nesinye sezihlobo zakhe, athemba ukuba uzakunikezela ngenkuthazo kwiminqweno yoncwadi yexesha elizayo kaFlora. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Ukuqina kweedola -9pm, TCM
Umlobi-mpu ongummangaliso ufika kwidolophu engenamthetho kumda waseMexico. Idolophu iqhutywa ziintsapho ezimbini ezisukuzanayo kwaye, emva kokubona amandla omphangi wokubulala umntu ongaziwayo, bobabini banomdla wokumthatha baye kwinjongo yabo. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Amaphiko omnqweno -11: 15 pm, Film4
Iingelosi ezimbini zihambahamba kwizitrato zaseBerlin, zijonga abantu abaphithizelayo, zinika imitha engabonakaliyo yethemba kwabo bakhathazekileyo kodwa bangaze basebenzisane nabo. Xa omnye wabo ethandana nomculi we-tropical ongumculi yedwa, ingelosi inqwenela ukufumana ubomi kwihlabathi elibonakalayo, kwaye ifumana-ngamanye amagama obulumko obuvela kumdlali weqonga uPeter Falk - ukuba kunokwenzeka ukuba athathe uhlobo lomntu. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
NgoLwesihlanu umhla wama-23 kuJulayi
I-Whisky Galore -3: 50 pm, BBC ezimbini
Uluntu lwesiqithi saseHebride luva ithuba lokuzalisa isitokhwe salo iwhisky xa inqanawa yemithwalo egcwele isiselo esixabisekileyo ishiyeke nonxweme. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
IBhendi yeWagon -18: 00, Imifanekiso ethetha ngeTV
Inkwenkwezi yaseHollywood uTony Hunter akenzanga bhanyabhanya iminyaka emithathu. Kodwa ngokukholisa okuncinci kubahlobo bakhe bakudala uLester kunye noLily Marton, uyavuma ukukhokela kumdlalo omtsha we-Broadway. Umvelisi nguJeffrey Cordova, onombono wakhe kukwenza ukuba ube ngumculo wokuqala ophambili kwi-Broadway. Iziphumo zihlekisayo, ziyathandeka kwaye zithandana .. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Indawo Ethe cwaka - 10:45 pm, Film4
Emva kweempungutye eziyimfama ezinambuzane ezineendlebe ezi-ethe-ethe zacima uninzi lwabantu, usapho lwabasindileyo luziqhelanisa nokuhlala buthule. Kodwa ukuba nosana olusendleleni, indlela yabo yobomi engenangxolo sele iza kuba nzima kakhulu… Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Unzima 2 - 11:05 am, ITV
Ngosuku lweKrisimesi: ngelixa wayelinde inqwelomoya yomfazi wakhe ukuba iye kuma kwisikhululo seenqwelomoya i-Dulles International eWashington DC, umcuphi uJohn McClane ubandakanyeka kwimishini ebulalayo nenobungozi yokuhlasela iqela labanqolobi abakhohlakeleyo abathathe isikhululo seenqwelomoya esixakekileyo ngenjongo yokuhlangula iziyobisi baron .. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo
Yintoni ekule TV yangoku kule veki?
Ukuba awufumananga nantoni na kwiishedyuli eziqhelekileyo zeTV ezikukhathaza ubumnandi bakho, NGOKU umabonwakude uhlala esongeza ezinye iifilimu kwingqokelela yazo - onokufikelela kuzo Ukupasa kweSky Cinema .
Nazi iimbalasane zale veki:
Igadi eyimfihlo - ngoku iyafumaneka
Ifilimu ibalisa ibali elithandekayo lentombazana encinci ethunyelwe ukuba ihlale nomalume wayo, apho afumana khona igadi entle kunye nenkwenkwe yalapha emncedayo ukuba iqonde iimfihlo ezifihliweyo zegadi
Usuku oluhle ekuhlaleni - ngoku iyafumaneka
Ngo-1998, intatheli yamaphephancwadi uLloyd Vogel wathunyelwa kudliwanondlebe nomdlaleli kamabonakude othandekayo uFred Rogers, isabelo avakalelwa kukuba siphantsi kwakhe. Nangona kunjalo, ubuhlobo buvela ngokukhawuleza phakathi kwala madoda mabini. Kudlala uTom Hanks, uMateyu Rhys kunye noChris Cooper. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo.
Le Mans '66 - ngoku iyafumaneka
Iinkwenkwezi zikaMat Damon njengoCarroll Shelby, umqhubi wemiboniso waseMelika kunye nomyili wezimoto owayebhaliswe yiFord ukuba aqokelele imoto - iFord GT40 - ukubetha iimoto zika-Enzo Ferrari nolawulo lwabo kugqatso. UShelby uqesha umqhubi onamandla uKen Miles (uChristian Bale), kwaye bekunye balwa nokuphazamiseka kubambiswano, imithetho ye-physics, kunye needemon zabo zobuqu ukwakha umdyarho wemoto.
Abenyanyekayo - ngoku iyafumaneka
Emva kokufumanisa isidalwa somlingo bakholelwa ukuba yi-Yeti, u-Yi okwishumi elivisayo kunye nabahlobo bakhe ababini baqala ukonwabisa. Bazama ukudibanisa isidalwa kunye nosapho, ngelixa bephepha umntu osisityebi osisinhanha kunye noochwephesha bezilwanyana abafuna ukubamba isidalwa kwiimfuno zabo. Funda uphononongo lwethu olupheleleyo.
Ufuna ezinye? Jonga ezona bhanyabhanya zethu zibalaseleyo kwisikhokelo se-TV Yangoku- Fumana iinyanga ezili-12 zeSky Cinema£ 11.99£ 9.99 / ngenyanga.
Ukuba uneNetflix siqokelele ezona bhanyabhanya zibalaseleyo kwiNetflix, olona luhlu lubalaseleyo kwiNetflix ukubukela ngoku kunye nababukeli beDisney + bajonge ezona bhanyabhanya zibalaseleyo kwisikhokelo seDisney Plus. IAmazon? Sineefilimu ezilungileyo kakhulu kwiAmazon Prime. Uzibuza ukuba ubukele ntoni kumabonwakude? Ndwendwela isikhokelo sethu seTV.
abaphindezeli endgame us ukukhululwa umhla
ithini intsingiselo ye111
celebrity ndikhupheni apha nifole
cofa (uthotho lwe-tv) phosa
yimalini i-premium ye-youtube uk
indawo encinci imibono yebhedi ye-murphy
abahamba befile kwi-netflix